घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू राफा सिल्वा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
एलबीले उपनाम संग फुटबल प्रतिभा को पूर्ण स्टोरी प्रस्तुत गर्दछ “पोर्तुगाली ईडन हजर्ड"। हाम्रो रफा सिल्वा बालपण कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खातामा ल्याउँदछ।
जीवन र राफा सिल्भाको उदय। छवि क्रेडिट: Omirante र Maisfutebol।
हो, सबैलाई थाहा छ उसको उत्कृष्ट बल कन्ट्रोल, उसको तेजस्वी ड्रिब्लिंग गति र उत्कृष्ट पासिंग दायराको बारेमा। यद्यपि, केवल केहि थोरैले राफा सिल्भाको जीवनी विचार गर्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
राफा सिल्वा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
राफेल अलेक्जान्ड्रे “राफा” फर्नांडीस फेरेरा डा सिल्भा पोर्चुगलको फोर्ट दा कासामा मे 17 को 1993th दिनमा जन्म भएको थियो। ऊ एक आमामा जन्मेकी थियो जसको नाम सँधै सर्च इन्जिनबाट टाढा रहँदैन, र उनको बुबा - जोओ सिल्भालाई।
रफा सिल्भाका आमा बुबा। छवि क्रेडिट: ZeroZero।
पोर्चुगिज सेता जातीय समुदायको कम ज्ञात जराहरू उसको गृहनगर - फोर्ट दा कासामा हुर्केका थिए, जहाँ कस्टर्डले भरिएको पेस्ट्री आविष्कार गरिएको थियो भनिन्छ। यद्यपि, जवान सिल्वा कमजोर कपालको पातलो बच्चाको रूपमा हुर्किए जसले उसलाई फुटबल खेल्न र अरू खेलमा भाग लिन रोक्न खोजे जुन उनी 10 वर्षको उमेरसम्म पुगेका थिए।
राफा सिल्वा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
यो स्पोर्टि स्कूल युनिओटो एटेल्टिको पोवोसेन्स थियो - फोर्ट दा कासाबाट3किलोमीटरको दूरीमा - सिल्भाले फुटबलको पहिलो कदम चाल्यो, यो गतिविधि उनले सान्ता मारिया दा फेराको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधिका साथ जोडे।
पोवोसेन्सका लागि खेल्दा, तत्कालीन एक्सएनयूएमएक्स-एक्सएनयूएमएक्स-बृद्धलाई अन्य टोलीहरूका डिफेन्डरहरूले डराउँथे र उनीहरूको सम्मान गर्थे जसले उनीहरूलाई वेग, ड्रिब्लिंग र बिजुलीका शटहरूमा उछिन्न सक्ने विश्वास गर्दैनन्।
युनिस्टो युनिसियो एट्लिटिको पोवोसेनमा प्रशिक्षण दिँदै जहाँ रफा सिल्भाले फुटबलमा आफ्नो पहिलो पाइला लिए। छवि क्रेडिट: Uapovoense।
राफा सिल्वा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ तथ्य
एक पूरा वर्ष फुटबलको आधारभूत कुरा सिक्न र खेल स्कूल युनिसियो एट्लिटिको पोवोसेन्समा बिताएको सिलवाले फुटेबोल क्ल्युब डे अल्वेर्काको लागि अग्रस्थान गर्यो जहाँ उनले युवावस्थाको धेरै भन्दा धेरै वर्षहरू बिताए।
मिडवेले क्लबमा आफ्नो7वर्षको यात्राको माध्यमबाट, सिल्भाले सम्मानजनक वजन प्राप्त गर्‍यो जुन उनीहरूको प्रतिस्पर्धीलाई उसको बारेमा कम सोच्नबाट रोक्छ। यद्यपि तिनीहरूको नजिकका चिह्नहरू उनको आक्रमणकारी पराक्रमसँग मेल खाँदैन।
Futebol Clube de Alverca मा राफा सिल्भाको बाल्यकालको फोटो। छवि क्रेडिट: Omirante।
राफा सिल्वा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकमा फेम स्टोरी
एक 18 वर्ष पुरानो सिल्वा सीडी फिरेन्ससँग हस्ताक्षर गर्न गयो जुन उनको क्लबको युवा प्रणालिमा 2011-2012 सीजनको लागि खेल्ने बनाइएको थियो किनकि उसको प्रमोशन एक बर्ष ढिला भयो।
सिल्वाले चाँडै पदोन्नती प्राप्त गर्‍यो र एफसी पेनाफिल बिरूद्ध 2-1 होम जीतमा आफ्नो व्यावसायिक पदार्पण गर्‍यो। यद्यपि उनी क्लबको लागि खेल्न सहज भएनन् जुन उनले महसुस गरे कि उनले आफ्नो सफलतालाई ढिलाउन सक्थे।
सीडी Feirense को लागी खेलिरहेको राफा सिल्भाको एक दुर्लभ तस्वीर। छवि क्रेडिट: Maisfutebol।
राफा सिल्वा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
नतीजास्वरूप, सिल्वाले एससी ब्रागामा सर्ने क्रममा कुनै समय खेर फाल्यो जहाँ रेशमी सीपहरू उसको वरिपरि टीम निर्माण गर्ने लगातार प्रबन्धकहरूले उच्च मूल्या rated्कन गरे। ब्रागासँग उसको महत्वपूर्ण उपलब्धीमा 2016 UEFA यूरोपा लिगको क्वार्टर फाइनलमा टीमको नेतृत्वका साथै 2016 टाका डि पोर्तुगल फाइनलमा एक जीत समावेश छ।
फास्ट फार टु डेट सिल्भा बेनिफिकाको आक्रमण गर्ने टोलीका एक प्रमुख स्ट्राइकर हो जसले क्लबका फ्यानहरू र ब्यवस्थापकहरूको साथ साथै उनका विपक्षीहरूको प्रशंसा जित्न छोड्दैन। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
राफा सिल्भा लेखनको समयमा बेन्फिकाका सर्वश्रेष्ठ आक्रमणकारीहरू मध्ये एक हुन्। छवि क्रेडिट: पोर्तुगालिन्स।
राफा सिल्वा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्धी जीवन तथ्यहरू
प्रत्येक फुटबल प्रतिभा पीछे एक शर्त समर्थन प्रेमिका छ। क्याचफ्रेजले राफा सिल्भा र उनको स्टाइलिश वैगको प्रेम क्लाउडिया डुआर्टेको साथ पहिचान गर्दछ।
आफ्नो प्रेमिका क्लाउडिया डुआर्तेसँग रफा सिल्भा। छवि क्रेडिट: सीएमजर्नल।
जे होस्, जबकि प्रेमबर्ड्सले भेटेको बारेमा थोरै मात्र थाहा छ, तिनीहरू एक परिपूर्ण जोडी भनेर मानिन्छन् जसको रोमान्स समयको परीक्षणबाट बचेको छ। यो ध्यान दिनु उपयुक्त छ कि दुबैले लेखेको समयमा अझै विवाह गरेका छैनन्, न त उनीहरूको छोरा (छोरी) र छोरी (हरू) लाई विवाहबाट बाहिर छ।
राफा सिल्वा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन तथ्य
परिवार रफा सिल्वाको लागि केवल महत्त्वपूर्ण चीज मात्र होइन, यो सबै कुरा हो। हामी उसको पारिवारिक जीवनको बारेमा तथ्यहरूको रूपरेखा दिन्छौं।
राफा सिल्वाको बुबाको बारेमा: जोओ सिल्भा राफका बुवा हुन्। जोआओ एउटा अयोग्य साईना धूम्रपान गर्थे जब सम्म सिल्भाले उनलाई शर्तको माग अनुसार एक निश्चित संख्याको गोल गरेर त्याग्थे। ती दुवैले जहिले पनि राम्रो बुबा-छोराको सम्बन्धको आनन्द लिएका छन् र एक अर्कामा सकारात्मक प्रभावको रूपमा सेवा गर्छन्।
राफा सिल्वाकी आमाको बारेमा: त्यहाँ लेख्दा सिल्भाकी आमाको बारेमा धेरै ज्ञात छैन। जे होस्, उनी सिल्भाको मुटुमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन् र स्ट्राइकरको परिवारको सबैभन्दा स्टाइलिश सदस्य हो।
रफा सिल्भा आफ्ना सहयोगी अभिभावकको साथ। छवि क्रेडिट: ZeroZero।
राफा सिल्भाका भाइबहिनीहरूको बारेमा: सिल्भा जोस सिल्वा भनेर चिनिने एक जेठो भाईसँग हुर्किए। दाजुभाइहरू धेरै हिसाबले एकै देखिन्छन् र जुम्ल्याहाहरूका लागि गलत हुन सक्छ। As जोस, त्यहाँ कुनै अन्य भाइबहिनी को बारे मा कुनै प्रमाणित उल्लेख गरिएको छैन।
रफा सिल्वा आफ्नो भाइ जोस संग। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
राफा सिल्वाका आफन्तहरूको बारेमा: त्यहाँ सिल्भाका बुवा र आमाबुबा हजुरआमाको कुनै रेकर्ड छैन, न त उनका काका, काकी, काकी, काका, भतिजा र भतिजीहरू लेखिएको समयमा चिनिन्छन्।
राफा सिल्वा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन तथ्य
के तपाइँ जान्नुहुन्छ कि सिल्भाको डाउन टू धरती व्यक्तित्व छ जबकि उसको व्यक्तित्व वृष राशिको चिन्हको लक्षण विकल्दछ? ऊ हास्यपूर्ण, असभ्य, विनम्र, नम्र छ र विरलै आफ्नो व्यक्तिगत र निजी जीवनको बारेमा जानकारी प्रकट गर्दछ।
यस स्ट्राइकरसँग धेरै आकर्षक रुचि र शौकहरू छन् जसमा पढाइ, खेल शर्त, फोटोग्राफी, पौडी, हास्य, पर्यटन स्थल, फिल्म हेर्ने र आफ्नो साथीहरू, परिवार र कुकुर संग राम्रो समय बिताउने समावेश छ।
राफा सिल्वा आफ्नो कुकुर संग गुणवत्ता समय खर्च। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
राफा सिल्वा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - जीवन शैली तथ्य
सिल्वाको बजार मूल्य € 28 मिलियन - लेखेको समयमा - आफ्नो वार्षिक तलब मा अन्तरदृष्टि दिन्छ र आफ्नो शुद्ध मूल्य अनुमान गर्न उपकरण प्रदान गर्दछ जुन लेखनको समयमा समीक्षा भइरहेको छ।
अर्कोतर्फ, सिल्भाको विलासी जीवनशैलीले ऊ फूटबल खेल्दा एउटा ठोस वित्तीय आधार निर्माण गरेको छ भन्ने व्यावहारिक शंकाको बाबजुद प्रमाणित गर्छ, जबकि उसको पोशाक शैली र छुट्टिको लागि छनौट गर्ने गन्तव्य उसको ठूलो खर्चकर्ताको रूपमा चित्रण गर्दछ, चाहे उसको घर र कार स collection्ग्रहको तथ्यलाई वास्ता नगरी। अझै अज्ञात छन्।
रफा सिल्वाको ड्रेसिंग र कोठा शैली शैली आफ्नो खर्च पैटर्न को मात्रा बोल्छ। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
राफा सिल्वा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
यस बायोमा उनको बारेमा के लेखिएको छ त्यस भन्दा पनि तपाईं रफा सिल्वालाई कत्ति राम्रो गर्नुहुन्छ? मिडफिल्डरको बारेमा यहाँ केहि कम-ज्ञात वा अनकही तथ्यहरू छन्।
धुम्रपान र मदिरा: सिल्वाले धुम्रपान मनपराउँदैन र आफ्नो बुबाहरूलाई बानी छोड्नको लागि मील टाढा गयो। यद्यपि उनी रक्सीको कदर गर्दछन् कि भनेर थाहा छैन किनकि उनी शट लगाउँदा वा बारमा जिम्मेवार भई पिइरहेका भेटिए।
ट्याटूहरू: स्ट्राइकरले ट्याटू मन पराउँछन् र दुवै हातमा शरीर कला छ। यद्यपि उनीहरु उनीहरुको पछाडिको अर्थ संचार गर्न अझै बाँकी छनन न त ट्याटूको पछाडि कारणहरु निर्धारण गर्न तस्विरहरु जानाजानी लिइएको छ।
राफा सिल्भाको ट्याटूहरूको छविहरू। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
धर्म: लेखेको समयमा राफा सिल्वाको धर्मको बारेमा त्यति धेरै कुरा थाहा पाइएको छैन किनकि उनले आफ्नो विश्वासलाई दर्शाउन छोडेका थिएनन्। मोरेसो, पोर्तुगाली अन्तर्राष्ट्रिय साक्षात्कार को समयमा प्रशंसक र प्रेस धार्मिक रूपमा हडताल गर्दैन।
सिल्भाको उपनाम पछाडि कारण: सिल्भा उपनाम "पुर्तगाली" थियो ईडन हजर्ड"उनको गोल स्कोरिंग र अवसर सिर्जना गर्ने क्षमताहरू बेल्जियमका खेलाडीहरू जस्ता छन् भन्ने तथ्यका कारण।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो रफा सिल्वा बालपण कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।